नवलपरासीमा २ लाख ३८ हजारको अवैध मालसामान बरामद -
परासी, २२ कार्तिक । प्रहरीले सनिवार जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट २ लाख ३८ हजार ९ सय मुल्य बराबर बिभिन्न अवैध मालसामान बरामद गरेको छ । दिउँसो १३.३० बजेको समयमा भारतबाट नेपाल तर्फ भन्सार छली अवैध रुपमा ल्याउदै गरेको अं. १ लाख २ हजार १ सय मुल्य बराबरको थान कपडा, लेडिज सुट, तन्ना, लाहा छाप लगायतका सामान सिमा प्रहरी चौकी महेशपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सरावल गाउँपालिका वडा नं. ७ बुलन्दपुर बाट बरामद गरेको छ ।
त्यसैगरी दिउँसो १४.३० बजेको समयमा भारतबाट नेपाल तर्फ भन्सार छली अवैध रुपमा ल्याउदै गरेको अं. १ लाख ३६ हजार ८ सय मुल्य बराबरको थान कपडा, लेडिज सुट, तन्ना, लाहा छाप सेन्डो भेष्ट, थान कपडा, साडी, Head phone, Key pad मोबाईल , बुफर, मेमोरी कार्ड, , Card Reader लगायतका सामान सिमा प्रहरी चौकी महेशपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सरावल गाउँपालिका वडा नं. ७ बुलन्दपुरबाट नै बरामद गरेको छ । बरामद सम्पुर्ण सामान आजै आवश्यक कारवाहीको लागि महेशपुर भन्सार कार्यालय बुझाईएको छ ।
हिन्दु मुस्लिमकाे अास्थाका केन्द्र मदार बाबा
सुस्ता, १६ फागुन । कुनै एक धर्मको नभई त्यहा मुस्लिम र हिन्दु अन्य समुदायका धर्मावलम्बीहरू समेत अवलोकन र पुजापाट गर्न जाने गरेका छन । तसै कारण पनि सयौ वर्ष देखि लाग्दै आएको मदारबाबा धार्मिक स्थलको रूपमा देश विदेशमा परिचित छ । विभिन्न किसिमका दु:ख लिएर आउने भक्तजनहरूले सु:ख ,शान्ति ,सन्तान प्राप्ति र विभिन्न किसिमका रोगहरू […]
Banner News 09/09/2020
पिकअप र मोटरसाइकल सहित १४ लाख बढीको मालसमान नियन्त्रण
🔹संजय कुशवाहा- नवलपरासी २४ भदौ । पश्चिम नवलपरासीको बिभिन्न ठाउँबाट १ पिकअप गाडी र २ वटा मोटरसाईकल सहित १४ लाख ४० हजार मुल्य बराबरको हरियो मटर (केराउ) नियन्त्रण गरिएको छ । बुधबार बिहान ईलाका प्रहरी सेमरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. १ सिसहनियाबाट लु १ ज ३९०२ नम्बरको बोलेरो पिकअप गाडी सहित ६० […]